Barakac Xoogan Oo Ka Socda Deegaanka Mooyaale. – Bogga Calamada.com
Barakac Xoogan Oo Ka Socda Deegaanka Mooyaale.
Wararka ka imaanaya deegaanka Mooyaale oo ka tirsan dhulka Itoobiya ay xooga kaga heysato Somalia waxey sheegayaan in xaalad kacsanaan ah maanta ay ka taagantahay deegaankaasi.
Xaaladaan Kacsan ayaa daba socota iska hor’imaad xoogan oo maalintii shalay gudaha deegaankaasi ku dhaxemaray Maleeshiyaat Somali iyo Oroma ah,waxa uu iska hor’imaadkaasi sababay khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed.
Inta la xaqiijiyay iska hor’imaadka shalay ka dhacay deegaankaasi waxaa ku dhintay ugu yaraan Shan ruux h,waxaana deegaanka ka socda Barakac xoogan ay oo sameynayaan dadka shacabka ee ku dhaqan deegaankaasi.
Maamulada Murtadiinta ee kala ah Cabdi Ileey iyo midka deegaanka Oromada oo Labaduba ah Maamulo ay dhisatay dowlada Xabashida Itoobiya ayaa sii hurinaya dagaalka deegaanka si loo baabiya shacabka Muslimiinta ah ee kasoo kala jeeda Qowmiyadaha Oromada Iyo Somalida.
Todobaadyo ka hor ayeey aheed markii Qarax ka dhacay goob Boosteejo ah oo laga raro gaadiidka ay ku dhinteen Lix ruux oo Oroma ah kaasi oo lagu eedeeyay iney ka dambeeyeen Maleeshiyaatka Murtadiinta ee maamulka Cabdi Ileey.
Dowlada Xabashida Itoobiya ayaa caan ku ah barakacinta dadka shacabka,waxeyna dhowr jeer dagaallo dad badan ay ku dhinteen ka dhex abaabushay Qowmiyaadka Muslimiinta Somalida iyo Oromada ee dalkaasi ku dhaqan.